Wararka Gudaha – Page 2 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
guuleed	 May 19, 2019 0
qeybta hoose waxaad ka dhagaysan kartaa warka subaxnimo oo saakay lagu soo qaatay qodobo kala duwan. Halkan kala deg warka Subaxnimo 19 05 2019.
guuleed	 May 18, 2019 0
Dhuuxa wareysiyada waa barnaamij mug weyn leh oo habeen walba ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan waxaana lagu soo qaataa wararkii ugu dambeeyay iyo wareysiyo muhim ah. Halkan kala deg dhuuxa wareysiyada 18 05 2019.lite
Axmad	 May 18, 2019 0
Si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay dalka iyo dibadda, dhagayso Idaacadda Al-Furqaan. Halkan ka dhageyso War Duhur 18 05 2019
Dagaal lagu qaaday Xabashida heysta Baardheere.
Ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisimaha ciidamada xabashida Itoobiya ay ku leeyihin degmada Baardheere ee gobolka Gedo. Dagaalka oo ahaa mid culus, in muda ahna socday, waxaa si toos ah isku fara…
qeybta hoose waxaad ka dhagaysan kartaa warka subaxnimo oo saakay lagu soo qaatay qodobo kala duwan. Halkan kala deg warka Subaxnimo 18 05 2019
Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka 12-09-1440
Axmad	 May 17, 2019 0
Barnaamijka Dhacdooyinka dunida islaamka waa todobaadle maanta oo kale ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan laguna soo qaato akhbaaraadkii ugu waaweynaa caalamka. Halkan ka dhageyso Barnaamijka Dhacdooyinka Dunida Islaamka…
Dhageyso Warka Duhur Ee Radio Alfurqaan .
Insha allaah halkaan waxaan idin kugu soo gudbineynaa warka duhurnimo oo lagu soo qaatay qodobo muhiim ah. Halkan Ka Dhageyso Warka Duhur 17 05 2019
cusmaan	 May 17, 2019 0
Diiradda Jimcaha waa barnaamij muhim ah oo todobaadkiiba maanta oo kale ka baxa warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan waxaana lagu soo gudbiyaa mawaadiic muhim ah oo xiriir la leh bulshada. Todobaadkan waxaa lagu soo qaatay kufsi iyo…
Dhageyso Warka subax Ee Radio Alfurqaan.
Halkaan waxaan idinkugu soo gudbinaynaa warka subaxnimo oo saakay khamiis ah lagu soo qaatay qodobo kala duwan. Halkan Ka Dhageyeso Warka subax 17 05 2019.